कृति गुरुङ र प्रीति गुरुङले आत्महत्या गर्दा कसरी छुट्टियो शरीर उछिट्टियो कपडा ? (भिडिओसहित) « Janata Samachar
कृति गुरुङ र प्रीति गुरुङले आत्महत्या गर्दा कसरी छुट्टियो शरीर उछिट्टियो कपडा ? (भिडिओसहित)
प्रकाशित मिति :2January, 2018 7:42 am
लमजुङ । २०७४ साउन ७ गते शनिबारे बिदा मनाउन आकाशे झरना हेर्न हिँडेका कृति गुरुङ र प्रीति गुरुङ बेपत्ता भए । उसो त उनीहरु साँझ घर फर्किएका थिए । झरना हेर्न जाँदा मोबाइल हराएपछि घरमा आउँदा अभिभावकले गाली गरेपछि हिँडेकाहरु उनीहरु कहिल्यै फर्किएनन् ।
र, मंसिर १ गते सुन्दरबजार नगरपालिका वडा नम्बर ५ स्थित थाक्ले सामुदायिक वनको हुँडखोलामा भेटिएको कंकाल कृति गुरुङ र प्रीति गुरुङकै भएको पाइयो । प्रहरीले दुवै जंगल पुगेर एउटै डोरीले एउटै रुखमा झुण्डिएर आत्महत्या गरेको बताएको छ ।
तर घटनास्थलको प्रकृति हेर्दा कृति र प्रीति गुरुङले लगाएका लुगा जंगलमा यत्रतत्र छरिएका थिए । अझ प्रीतिको करङको भाग छिया छिया थियो भने शरीर दुई टुक्रा भएको अवस्थामा भेटिएको थियो । आत्महत्या गर्दा मान्छेको शरीर कसरी छुट्टिन्छ ? कुनै विष्फोटमा परे झैँ कपडा उछिट्टिनु, ज्यान दुई टुक्रा हुनु । यो आत्महत्याको हुलिया हुँदै होइन ।
घटनास्थल पुगेकाको बयानमा पनि कृति र प्रीतिको कंकालमा कपडा थिएन । कपडा त घटना स्थलभन्दा निकै पर पो भेटिएपछि कतै घरबाट हिँडेका दुई छोरी कुनै अभरमा परे कि ? कसैले मारेर र पो झुन्ड्याइदिए कि, पोष्टमार्टम रिपोर्ट आउन बाँकी नै छ ।
पूरा कथाका लागि भिडियो हेर्नुहोस्ः जनता टेलिभिजनको लोकप्रिय कार्यक्रम ‘सिएमडब्लु अर्थात् क्रिमिनल्स मोस्ट वान्टेड ।’